प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटकाल घोषणाको तयारीमा ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ खोज/विशेष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटकाल घोषणाको तयारीमा ?
काठमाडौं । आजकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा संकटकालिन स्थितिको घोषणा गराउने मानसिक तयारीमा लागेको संकेत बाहिर आएको पूर्वएमाले निकट कतिपय स्रोतको दावी छ ।
पार्टीका च्यालेन्जरहरूलाई तह लगाउन पार्टी नै फुटाउने वा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने कुरा त्यति सजिलो नभएपछि उनीसँग तेस्रो विकल्पका रुपमा कम्तिमा ६ महिनाको लागि संकटकाल घोषणा नै सहज उपाय रहेको बताइन्छ । ‘व्यवस्थामाथि नै खतरा आईलागेको छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको नवीन टिप्पणीले पनि संकटकालतिर जान लागेको संकेत गरेको छ ।
पछिल्लो जानकारी अनुसार राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग आफ्नै निवासमा एक साँझ भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो सोच फुत्किएको सत्तारुढ ने.क.पा. निकटस्थको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त धारणामा ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गर्नुअघि नै बीपीले संकटकालको घोषणा गरेको भए राजा पनि त्यसमा बाँधिन सक्थे भन्ने तर्क देखिन्छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारले माखो मार्न नसकेको अवगालले आफूलाई पोल्न थालेपछि आजकाल ओलीले यो अन्तिम ब्रम्हास्त्र हान्ने मानसिक रुपमा सोच्न थालेको देखिन्छ । यसबीचमा जति पनि लोकतन्त्र प्रतिकूलका विधेयकहरू आए, ती सबै संकटकाललाई समेत मध्यनजर गरेर तयार गरिएका प्रावधान हुन् भन्ने निहितार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।
र याे पनि पढ्नुहाेस्…....दुईतिहाई सांसदको समर्थनमा पराजित मानसिकताका ओली
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग भयो भन्दै छन् । पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूको आफ्नै जवाफ छ, “प्रधानमन्त्री (ओली) जीले आफूखुसी मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाई नै गर्न नचाहेको र संसदीय समितिले छलफल नै गर्न अस्वीकार गरेको समीम मियाँ अन्सारीजस्ता विवादास्पद पात्रलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाइयो । विदेश नीति फुट्टी नजानेको र देशकै बेइज्जत हुने पात्रहरुलाई उनले राजदूत बनाए ।
उनी प्रचण्डसँगको भेटमा, “तपाईसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यो मैले निद्राको सुरमा गरेको हो र ! सहमति त तपाईसँग भएको हो नि, सत्ता अर्कोले पाउने शंका किन आयो ?” वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई डाकेर उनी त्यसै भन्छन, “कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको ? माओवादीलाई लगेर सत्ता बुझाउँछु म …..?”
ओलीको विरोध गर्ने सवालमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरू एकैठाउँमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैलाई प्रधानमन्त्री पदको लालच देखाएर फुटाउ र राज गरको रणनीति अपनाइरहेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार ओलीबाट पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कदाचित विवाद र अविश्वास भए त्यसको निराकरण गर्न लाग्नुपर्नेमा उनी प्रचण्डसँगको भेटमा, “तपाईसँग जुन सम्झौता भएको छ त्यो मैले निद्राको सुरमा गरेको हो र ! सहमति त तपाईसँग भएको हो नि, सत्ता अर्कोले पाउने शंका किन आयो ?” वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई डाकेर उनी त्यसै भन्छन, “कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको ? माओवादीलाई लगेर सत्ता बुझाउँछु म …..?”
र याे पनि थप पढाैं…..हुकुमी शैलीमा प्रम ओली, समृद्धिकाे नाराभित्र भ्रष्टाचार र कुशासन
अघिल्लो लेखमोटरेवल पुल बगाएपछि सवारीसाधनलाई म्यार्दीखोला बाधक
अर्को लेखभारतको धौलीगङ्गा बाँध खोलियो, नागरिकलाई नदी छेउछाउ नजान अनुरोध !
एमसीसीबारे सचिवालय बैठकमा चर्काे विवाद
कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने
बालुवाटारमा बजेटबारे दुई छुट्टाछुट्टै बैठक
आश्वासनको पुलिन्दा हो – ओलीको भाषण